Ahoana ny fomba hahazoana fidiram-bola azo antoka azo antoka mba hanatsarana ny SEO tranonkala?
Backlinks no hevi-dehibe ampiasaina amin'ny sehatra fanatsarana ny fikarohana. Misy karazana backlinks sasany dia misy arakaraka ny tanjony sy ny kalitaony. Maro ireo mpivarotra an-tserasera izay vao nanomboka nanangana sy nampiroborobo ny orinasan-tseratsera an-tserasera, mahatsiaro ho kivy rehefa manangana rohy. Ho an'ny olona vaovao eto amin'ity sehatra ity, dia mety ho sarotra be ny dingam-pamokarana kalitao tsara. Ity lahatsoratra ity dia natao manokana ho an'ireo izay mikaroka fanazavana fanampiny ao amin'ny backlink SEO. Ho hitanao eto ny antony mahatonga ny backlinks ho zava-dehibe amin'ny SEO sy ny fomba hanavahana ny lisitry ny backlinks amin'ny natiora sy tsy ara-dalàna.
Ny andraikitry ny backlinks ao amin'ny SEO
Backlinks dia ireo rohy ivelany izay mifandraika amin'ny tranokalanao na bilaogy. Izy ireo koa dia fantatra amin'ny rohy miditra. Ny fitaovam-pikarohana finday dia manintona ny rindranasa ho toy ny famaritana ny laza malaza sy ny laza. Ny rindran-damina kokoa avy amin'ny loharanom-baovao dia manondro ny tranokalanao, ny fahefana bebe kokoa avy amin'ny fitaovam-pikarohana azonao. Ny soso-kevitry ny fikarohana momba ny bitsika dia manondro ny heviny rehefa mikaroka ny rindranasa fikarohana ireo botsikilina izay manondro tranonkala iray mba hahitana votoaty mifanentana amin'ny fangatahan'ireo mpampiasa. Rehefa manitsy ny maha-zava-dehibe ny tranonkala amin'ny fikarohana fikarohana manokana ny mpikaroka, dia heveriny ny isa misy ny rohy mankany amin'ny tranonkala. Izany no antony tokony hoeritreretinao aloha ny hatsaran'ny rohy miditra fa tsy ny habetsahany. Google dia mandinika ny votoatin'ny tranonkala iray mba hamaritana ny kalitaon'ny rohy. Midika izany fa tokony handinika manokana momba ny votoatin'ny tranonkala misy toerana misy ny backlinks ianao. Raha toa ka tsy misy ifandraisany amin'ny votoatiny ny rindran-damina dia tsy dia ilaina loatra ny rakitra.
Misy karazana backlinks roa lehibe - rindrankajy artificial (tsy ara-boajanahary) ary rohy (voajanahary voajanahary).
Backlinks artificial (tsy ara-boajanahary)
Backlinks tsy ara-nofo dia ireo izay noforonina tsy ara-dalàna. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ireny rindran-damina ireny dia novidin'ny tompon'ny tranonkala na webmasters avy amin'ny sehatra hafa tsy misy kalitao. Manana tanjona dokam-barotra izy ireo ary toa tsy mahazatra loatra amin'ny karoka sy ny mpampiasa azy. Betsaka ny fivarotana tranonkala tranokala fantatra amin'ny anarana hoe artificial ary tsy manan-danja amin'ny tranokalanao. Tsy manoro hevitra anao aho handraisako ny lisitry ny finday SEO izay mety ho farany amin'ny vokatra ratsy sy ny sazy avy amin'ny Google aza.
Backlinks natural (organic)
Ity karazana rohy ity dia manondro ireo backlinks izay tsy azonao. Mitranga izy ireo rehefa mampifandray ny pejin'ny tranonkala na ny lahatsoratra ho ohatra na referanso ny tompon'ny tranonkala, bilaogera na mpanao gazety. Ity karazana backlinks ity dia manimba ny fandehan'ny tranonkala ary manintona ny fifamoivoizana amin'ny serivisy. Mba hahazoana rindran-damina voajanahary, mila mamorona votoatim-pahalalana sy fikarohana ianao, izay ahitan'ireo mpampiasa sy ireo tompona tranonkala hafa fanampiana sy sarobidy ho azy ireo. Ataovy azo antoka fa ny lohahevitry ny tranokala iray izay ahafahanao mamadika rindran-kaonty dia mifandraika amin'ny lohahevitra sy ny orinasanao. Ankoatra izany, tokony hodinihina manokana ny lahatsoratry ny piraofilinao. Ity lahatsoratra ity dia tokony hifanaraka amin'ny iray amin'ireo teny fanalahidy tianao hotratrarina Source .